प्रथम मेयर कपको ट्रफी नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नं ८ को हातमा, तिन अवार्ड पनि ८ लाई नै – Radio Roshi
२ वडाका किसानलाई भैँसीको थोरे वितरण गर्दै पाँचखाल नगरपालिका
नगरका सहकारीहरुलाई पनौती नगरपालिकाद्वारा ५ बुँदे निर्देशन
तेमाल ७ का ४५ जनाले घरदैलोमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाए
काभ्रेमा आज ५८ जना निको हुँदा ५३ जना संक्रमित थपिए
समुदाय र स्वास्थ्य चौकीलाई खार्पाचोक युवा क्लबद्वारा स्वास्थ्य सामग्री वितरण
सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक विस्तार हुने
प्रथम मेयर कपको ट्रफी नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नं ८ को हातमा, तिन अवार्ड पनि ८ लाई नै
in खेलकुद — by Roshikhabar —	December 16, 2019
यश कुमार परियार–मंङसिर ३०,
प्रथम मेयर कप अन्तर वडा फुटबल प्रतियोगिताको ट्रफी नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नं ८ ले जितेको छ । नमोबुद्ध नगरपालिकाद्धारा आयोजित प्रथम मेयर कप अन्तर वडा फुटबल प्रतियोगिताको आज वडा ८ र १ बिच भएको फाईनल खेलमा वडा नं ८ ले ३–१ गोल अन्तरले पराजित गरेको हो ।
वडा नं ८ का जर्सी नं ९ सुनिल लामाले सुरुवाती मिनेटमा नै गोल गर्दै खेलमा अग्रता बनाएका थिए । त्यसको केहि मिनेटमा नै वडा नं १ का जर्सी नं ३ गणेश लामाले गोल गर्दै खेल बराबरीमा ल्याएका थिए । पहिलो हाफ बराबरीमा सकिएको खेल सुरु हुने बित्तिकै वडा नं ८ का जर्सी नं ९ सुनिल लामाले गोल गरे भने पुन वडा ८ कै जर्सी नं १३ सुनिल तामाङले गोल गर्दै अग्रता कायम राख्न सफल भए । ३–१ को फराकिलो जित सँगै वडा नं ८ प्रथम मेयर कप अन्तर वडा फुटबल प्रतियोगिताको ट्रफी जित्न सफल भएको छ । त्यस्तै वडा नं १ दोश्रो र वडा नं ९ तेश्रो हुन सफल भएको छ । फाईनल खेल हुनु अघि वडा नं ९ र ३ बिच तेश्रो स्थानको लागी खेल भएको थियो ।
प्रथम हुने वडा नं ८ लाई जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख उद्धव के.सी., नगर प्रमुख टि.पि. शर्मा तिमल्सिना, २६ दल वाहिणी अड्डा भकुण्डेका प्रमुख सुरज बहादुर सुनुवार लगायतले नगद ३० हजार सहित ट्रफी, प्रमाण पत्र साथै मेडल प्रदान गरिका थिए । त्यस्तै दोश्रो हुन सफल वडा नं १ ले २० हजार र तेश्रो हुने वडा नं ९ ले नगद १० हजार सहित ट्रफी, प्रमाण पत्र साथै मेडल प्राप्त गरेका छन् ।
खेलमा म्यन अफ दि म्याचको ट्रफी वडा नं ८ का जर्सी नं ९ सुनिल लामाले हात पारेका छन् भने, बेस्ट किप्परको ट्रफी वडा ८ कै जर्सी नं १८ सरोज तामाङले जित्ज सफल भएका छन । त्यस्तै सर्वाधिक गोल गर्न सफल भएकोमा वडा नं ८ का जर्सी नं १३ मन कुमार मोक्तानले ट्रफी जित्न सफल भएको सहकर्मी रामेश्वर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
त्यस्तै खेल सुरु हुनु भन्दा अघि १३ औँ साग अन्तर्गत साईक्लिङमा स्वर्ण पदक बिजेता नमोबुद्ध नगरपालिका वडा नं ७ कि निस्मा श्रेष्ठलाई नगरपालिका प्रमुख टि.पि. शर्मा तिमल्सिनाले सम्मान गरेका थिए । नगरपालिकाले ट्रफी सहित रु ३० हजार र नगर सभापति कुन्साङ लामाले रु १० हजार सहित सम्मान गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितीका सदस्य कृष्ण बहादुर तामाङ,नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत भोला प्रसाद चापागाँई, शिक्षा शाखा प्रमुख जनार्दन रिजाल, नगरका जनप्रतिनिधिहरु लगायत खेल प्रेमीहरुको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो । खेल अबधी भर मेथिङकोट अस्पताल र सहरी स्वास्थ्य केन्द्र भेडावारीले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेको थियो ।
June 13, 2021 —0comments
जेठ ३०,२०७८,काभ्रे/पाँचखाल नगरपालिकाले भैँसीको थोरे वितरण गर्ने भएको छ । आईतबार पालिकाले एक सूचना जारी गर्दै वडा नम्बर ५ र १३ का किसानलाई भैँसीको थोरे वितरण गर्ने जनाएको हो । संघ र प्रदेश सरकारको ५० प्रतिशत अनुदान र कृषकको ५०[Read More…]
विपी राजमार्गको आकस्मिक सूचनाप्रणाली छ वर्षदेखि अलपत्र